मेयर चौधरीले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति गल्ती महसुस कि सरण्डर ? | Citizen Post News
मेयर चौधरीले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति गल्ती महसुस कि सरण्डर ?
२०७६ जेष्ठ २७ गते १७:३५
इटहरी । आफ्नो विवादास्पद बोली र काम गराईका कारण केही समय यतादेखि विवादमा पर्दै आएका इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारकलाल चौधरीले आइतबार अचानक सवैलाई चकित पार्दै विज्ञप्ति निकाले । विज्ञप्ति थियो-उनले विगत केही समयअघि सञ्चारकर्मीलाई नाक भाँच्न एक करोड छुट्याएको अभिव्यक्ति । त्यति मात्र होइन, उनले सञ्चारकर्मीलाई दर्जनौं आरोप पनि थोपरेका थिए । आखिरमा उनको आरोप कतैबाट पनि पुष्टि भएन । पुरै समाज पक्ष र विपक्षमा बाँडियो ।
सञ्चारकर्मीलाई लगाइएका संगीन आरोपका काररण उनी त तनाबमा पर्ने नै भए । अर्कोतिर, आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण चौधरी थप विवादमा पर्दै गए भने सञ्चारकर्मी भरत अनुपमले आफूलाई प्रमाणसहित बलियो सावित गर्दै प्रस्तुत भए । चौधरीले आफ्नो बोलीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा उनको थप आलोचना मुलुकभरबाट हुन थाल्यो ।
उनीमाथि डिप्रेसनको औषधी खाइरहेको र मानसिक सन्तुलन ठिन नभएको मात्र आरोप लागेन, उद्दण्ड, अराजकजस्ता आरोप पनि लागे । अन्ततः चौधरी आफैले गल्ती महसुस गर्दै विज्ञप्ति निकालेरै क्षमायाचना गरे । उनले आफू उद्दण्ड नभई अनुशासित भएको बताए । विज्ञप्तिमै उनले आफुले बोलका शब्दका कारण पत्रकार र पुरै प्रेस जगतलाई पर्न गएको क्षतिप्रति विज्ञप्तिमार्फत दुःख व्यक्त गर्दै आफ्ना शब्द फिर्ता लिए ।
उनले आफू प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध भएको समेत जनाए । मेयर चौधरीको उक्त कदमपछि फेरी उनको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ । त्यसको एक मात्र कारण हो-उनले गल्ती महसुस गरी आफूलाई सच्चाउन प्रयास गर्नु । उनको विचारलाई प्राथमिकताका साथ सवै सञ्चारमाध्यामले प्रकाशित पनि गरेका छन् । चौधरीको कदमले सञ्चारकर्मी अनुपममाथि लागेको आरोप त तत्काल नमेटिएला तर उनलाई राहत भने मिलेको छ ।